Cobalt Air dia nanambara ny sidina Larnaca - London Heathrow
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cobalt Air dia nanambara ny sidina Larnaca - London Heathrow
Janoary 23, 2018
Cobalt Air avy any Sipra dia nanambara serivisy vaovao isan'andro nanomboka ny 27 martsa 2018, mampifandray an'i London Heathrow mivantana amin'i Larnaca, Sipra. Cobalt Air no hany mpitatitra manolotra fifandraisana amin'i Sipra amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe telo any Londres: Heathrow, Gatwick ary Stansted.
Andrew Madar, CEO, Cobalt Air naneho hevitra:
“Faly izahay manampy an'i London Heathrow amin'ny tamba-jotra UK izay tsena lehibe ho an'ny fizahan-tany sy ny orinasa any Sipra. Cobalt Air no hany mpitatitra manidina avy amin'ny seranam-piaramanidina telo lehibe any Londres mankany Sipra. Ny Cobalt Air dia lasa zotram-piaramanidina ankafizin'ny vahoaka Sipra; ary tsy afaka miandry izahay hampiseho aminao ny fandraisana tsara sy ny serivisy an-tsambo anao rehefa manomboka ny fialantsasatra na ny dia ataonao avy any London mankany Sipra ianao. ”
Ny làlana Heathrow dia hanasongadinana ny vokatra kilasy fandraharahana vaovao an'ny Cobalt Air, izay ahitana seza fandraharahana lehibe voaravaka anaty rindran-damina roa miaraka amina haavo 40 ”. Izany dia hitondra ambaratonga vaovao fampiononana orinasa amin'ny làlana.
Ny sidina dia hiala ao London Heathrow T3 amin'ny 5.20 hariva ary tonga ao Larnaca amin'ny 11.50 hariva. Teny an-dalana mody, sidina miala an'i Larnaca amin'ny ora fisakafoanana, 12.45pm ary miverina any London Heathrow T3 amin'ny 3.45 hariva. Ny isam-potoana rehetra dia eo an-toerana. Cobalt Air dia hampiasa fiaramanidina A320 misy seza 12 amin'ny kilasy fandraharahana ary seza 144 amin'ny kilasy toekarena hampiasana ny zotra vaovao
Misafotofoto: Manondrana Elefanta Zimbabwe ao anatin'ny fanamelohana manerantany
FITUR Madrid: tapaka ny rakitsoratra niaraka tamin'ny solontena 140,120 erak'izao tontolo izao